🥇 ▷ Qualcomm: Snapdragon 855 Plus waxay bixisaa CPU dheeraad ah iyo xawaare saacad GPU ah ✅
Qualcomm: Snapdragon 855 Plus waxay bixisaa CPU dheeraad ah iyo xawaare saacad GPU ah
Si la yaab leh, Qualcomm wuxuu ku dhawaaqay nooc karti-sare uqaaday oo loo yaqaan ‘Snapdragon 855’. Asus waxay la qorsheyneysaa ROG Phone II nooc cusub oo ku habboon qalab casri ah.
Qalabka loo yaqaan ‘Snapdragon 855 Plus’, Qualcomm wuxuu sare u qaaday saacadda ugu badan ee Prime Core, oo horay u ahaan jirtay 2.84 GHz, ilaa 2.96 GHz. Nidaamka magacaawinta wax iskama beddelin iyadoo loo magacaabayo Kryo 485 afarta koorso ee ku saleysan ARM Cortex-A76. Sida lagu sheegay war-saxaafadeedka, Qualcomm wax isbedel ah kuma uusan sameynin seddexdii foosto ee haray ee loo yaqaan ‘cryo-485’ si ay u sii wadaan inay ku socdaan ugu badnaan 2.42 GHz. Afarta koor ee yaryar ee SoC, waxaa kaloo loo yaqaan Kryo 485 Qalin, oo ku saleysan saacadda ‘Cortex-A55’ oo leh ilaa 1.80 GHz.
Marka lagu daro CPU, Qualcomm wuxuu dib u habeeyay GPU. Qaybta sawirka Adreno 640 ee aan is beddelin waxay bixisaa 15 boqolkiiba waxqabad ka sarreeya kan loo yaqaan ‘Snapdragon 855’, sida laga soo xigtay Qualcomm. Maaddaama Qualcomm uusan isticmaalin nashqadeyn cusub oo leh cutubyo kala duwan oo garka leh, waxaa jira kaliya kordhin kororka saacadaha ugu badan. Qualcomm ma shaacin xawaaraha saacadaha ee GPU, laakiin hore u Snapdragon 855 wuxuu lahaa 585 MHz. Anandtech hadda laga shakisan yahay ilaa 672 MHz.
Qualcomm wuxuu ku xushaa laba fasal
Labada isbeddelo ayaa ku doodaya in la beddelo heerar sare, oo u oggolaanaya marar badan saacadaha. Sida muuqata, Qualcomm ayaa dooran kara SoC labo fasal, kuwaas oo ku kala duwan, tusaale ahaan, cabbirro sida awood-darrooyinka xad-dhaafka ah iyo waxtarka tamarta. Chipsyada fiican ayaa ah Snapdragon 855 Plus, oo ka sii xumaanaya Snapdragon 855th Wax soo saarka ayaa weli ku jira 7 nm oo ka yimid TSMC.
Marka laga reebo hagaajinta saacadaha, Qualcomm wax isbedel ah kuma aysan sameynin SoC. Waxa uu Snapdragon 855 sameyn karo, ComputerBase ayaa si faahfaahsan u sharraxay ku saabsan bilowga SoC dhammaadka sanadkii hore. Qalabka loo yaqaan ‘Snapdragon 855 (Plus)’ wali waa chip-ka kaliya ee casriga ah ee loo yaqaan ‘Qualcomm’ chip desktop ‘kaas oo lagu diyaarin karo 5G iyadoo loo sii marayo modemka Snapdragon X50. Tallaabada xigta, Qualcomm wuxuu awood u yeelan doonaa inuu dhexgeliyo modem noocyo badan leh (X55) dhammaan heerarka moobiilka si toos ah SoC marka ugu horreysa bisha Diseembar.
Baashaal Asus ROG Phone II
Marka la barbar dhigo ku dhawaaqista Qualcomm Asus waxay ku dhawaaqday ROG Phone II oo leh Snapdragon 855 Plus siday u kala horreeyaan aragtidan, maxaa yeelay waxaa intaa dheer in processor-ku-ku-dhex-dhisay weli xog la’aan ah. Aasaaska daabacaadan cusub ayaa ah in la keeno nambarkiisii ​​ka horeeyay (imtixaan), kaas oo nooca cusub leh “ku qalabeysan oo leh astaamo cusub oo cusubFaahfaahin dheeri ah iyo sidoo kale qiimaha iyo helitaanka ROG Phone II ayaa waxaa shaaca ka qaadi doona Asus goor dambe.